- सविना देवकाेटा | काठमाडौं, फागुन २१
नेपालको आफ्नै उन्नत उपकरण हुन्थ्यो भने भूकम्पले भग्न भएको काष्ठमण्डपबाट काकतालीले भेटिएको काठ सातौँ शताब्दीको हो भन्ने थाहा पाउन काठलाई बेलायतको दुहार्म युनिभर्सिटी नै पठाउनु पर्दैन थियो ।
नेपालको प्रविधि विज्ञानसम्मत हुन्थ्यो भने अभिलेखालयका चिसा, बुइँगल, ओसिला दराज अनि कपडाका पोकामा कोचिएका अभिलेख ढुसी परेर बारबार कुहिँदैनथे ।
नेपालको संरक्षण चेत प्रविधिमैत्री हुन्थ्यो भने विदेश जाने क्रममा पुराना मालसामान लैजाँदा सय वर्ष पुरानो हो कि होइन भन्ने थाहा पाउन गरिने क्युरियो जाँचपासमा हेरेकै भरमा, बिनाकुनै वैज्ञानिक आधार नै पुरातत्त्व विभागले उमेर अन्दाज गर्नु पर्दैनथ्यो ।
चाँगुनारायण मन्दिर कति वर्ष पुरानो भनेर अनुमानकै भर परिरहनुपर्दैनथ्यो होला । सबैको नजरमा रहस्यमयी बनेको पशुपतिको विरुपाक्ष मूर्ति किराँतकालीन हो कि होइन, दुविधाको नाउँ पार गरिरहनु पनि पर्दैनथ्यो ! पनौतीको इन्द्रेश्वर मन्दिर १३औँ शताब्दीको भए/नभएको निर्क्योल अमेरिकाको प्रयोगशालाले गरिदिइराख्नु पर्दैनथ्यो । लुम्बिनीमा भइरहेको उत्खननमा भेटिएका सम्पदा कति वर्ष पुराना हुन् भन्ने थाहा पाउन दुहार्म युनिभर्सिटी नै गुहार्नु पर्दैनथ्यो ।
यदि नेपालको संरक्षण चेत प्रविधिमैत्री हुन्थ्यो भने...!
यदि नेपालको आफ्नै प्रयोगशाला हुन्थ्यो भने...!
के, नेपालमा साँच्चै प्रयोगशाला छैन त ?
केन्द्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण प्रयोगशालाको कार्यालय ओगटेर बसेको महानगरीय प्रहरी प्रभाग, मंगलबजार
पाटन मंगलबजारस्थित हःखा टोलमा हाल रहेको महानगरीय प्रहरी प्रभागको कार्यालय नै सम्पदा संरक्षण प्रयोगशालाको कार्यालय हो, जुन हाल आफ्नै संरक्षणको पखाइमा संघर्षरत छ । झट्ट हेर्दा प्रहरीको कार्यालयजस्तो देखिने सो संरचना खास केन्द्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण प्रयोगशाला हो ।
विडम्बना, गएको भूकम्पमा प्रयोगशालामा शरणार्थी बन्न आइपुगेको सो प्रहरी कार्यालयले हाल प्रयोगशालालाई हाताभित्रै ओझेलमा पारिदिएको छ । प्रहरीका ठूलठूला होर्डिङ बोर्डबीच खुइलिएको रातो अक्षरमा आफ्नो नामसमेत जोगाउन संघर्षरत देखिन्छ, प्रयोगशाला ।
परेवाको घरमा परिणत प्रयोगशाला
त्यसो त नाम मात्रै होइन, प्रयोगशाला हाल कामविहीन पनि भएको प्रस्ट देखिन्छ । जसको प्रमाण हो, काष्ठकला कार्यशाला नामक प्रयोगशालाको प्रमुख कोठा ।
परेवाको आवाजले गुञ्जायमान कोठाभरि परेवाले गुँड लगाएका छन् । परेवाले ढालिदिएका सिसाका फर्नेस, केमिकल छरपस्ट छन् । आजित भएर कार्यालय सहयोगी प्रत्येक कोठामा जाली ठोकिरहेका छन् ।
प्रयोगशालामा छरपस्ट फुटेका फर्नेस र केमिकल
कोठाभरि धुलो जमेको छ । जालो लागेको छ ।
हटप्लेट, हट इयर ओभन, माइक्रोस्कोप, पीएच मिटर, मोफल फर्नेक, फ्लेस्कोमिटरलगायतका उपकरण धुलोको खोल ओढेर बसेका छन् । जुन अधिकांश चल्दैनन् ।
प्रयोगशालाको स्टोर रुमको खसेको सिलिङ
स्टोर रुमको ‘फल्स सिलिङ’ त खसिनै सकेको छ । भएका २४ कोठामध्ये ६ कोठा प्रहरीले अधिग्रहण गरिदिएको छ ।
पानी चुहिएर मक्किएको छ काठको छानो ! यस्तो लाग्छ, नेपालभरिका पुरातात्त्विक सम्पदालाई ओत दिनुपर्ने प्रयोगशालालाई आफ्नै मक्किएको छानाले गिज्याइरहेको छ ।
प्रयोगशालामा छरपस्ट फुटेका सरसामान
पुरातत्त्व विभागअन्तर्गत रहेको प्रयोगशाला हाल यसरी हरेक किसिमले उपेक्षित बनेको प्रयोगशालाका प्रमुख तथा वरिष्ठ डिभिजनल केमिस्ट कञ्चनकुमार नायकको आरोप छ । ‘पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने फराकिलो जिम्मेवारी पाएको प्रयोगशालामा अहिले हामी ‘केमिकल कन्सर्भेसन’ (रासायनिक संरक्षण)मा मात्रै सीमित छौँ’, कुमार भन्छन्, ‘त्यही पनि परम्परागत शैलीमा ।’
विभिन्न मठमन्दिर, संग्रहालय, पुराना दरबार, उत्खननमा भेटिएका भित्तेचित्र, हड्डी, छाला, काठ, ताडपत्र, भोजपत्र, कागजजस्ता जैविक र धातु, प्रस्तर, ढुंगा, सेरामिक, काँच, मुगा आदिजस्ता अजैविक पदार्थबाट बनेका पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको रासायनिक विधिबाट संरक्षण गर्ने काम गर्दै आएको प्रयोगशाला हाल कामविहीन बनेको छ ।
प्रयोगशालाका प्रमुख कञ्चनकुमार नायक
पुरातत्त्व विभागले कुनै समन्वय नगर्ने गरेको नायकको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘कहाँ के संरक्षण गर्न जरुरी छ भन्ने अध्ययन पुरातत्त्व विभागले पहिचान गरेर हामीलाई पठाउनुपर्ने हो तर कुनै समन्वय नै छैन । हामी आफ्नै हिसाबले काम पहिचान गरेर सीमित काम मात्रै गरिरहेका छौँ ।’
४० वर्षअघि सञ्चालनमा आएको प्रयोगशालामा २२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहँदै आएकोमा हाल १५ कर्मचारीमा संकुचन गरिएको छ । भएका सीमित उपकरणमा पनि अधिकांश चल्दैनन् । चले पनि पुरानो र परम्परागत शैलीका उपकरण मात्रै भएको नायकको भनाइ छ ।
एकातिर मठमन्दिर, संग्रहालयहरूमा मूर्ति खिइने र अभिलेख कुहिएर जाने, अर्कोतिर यसरी प्रयोगशालाका केमिस्टलगायतका जनशक्ति कामको अभावमा कार्यालयमै खेर जानु विरोधाभाष भएको उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘हामीलाई निरीह बनाइएको छ ।’
प्रयोगशालाका प्रयोगविहीन सामग्री
‘प्रयोगशालालाई विज्ञानसम्मत बनाउनुको विकल्प छैन’
‘नेपालमा भएका हरेक पुरातात्त्विक सम्पदाको वैज्ञानिक अभिलेख राख्ने सामर्थ्य हामीसँग हुुनुपर्थ्यो,’ २१औँ शताब्दीमा हुनुपर्ने प्रयोगशालाको परिकल्पना गर्दै नायक भन्छन्, ‘न त हामीलाई दिइनुपर्ने उपकरण दिइएको छ, न कामममा समन्वय नै गरिएको छ ।’
त्यसो त प्रयोगशालालाई एक समय बीचमा बन्द नै गर्न खोजिएको प्रयोगशालाका एक पूर्वप्रमुख बताउँछन् । ‘नेतृत्वगत कमीकमजोरीका कारण काममा समस्या आएपछि प्रयोगशालाको काममा ठूलो ह्रास आएको पनि थियो, तर यसको मूल्य हालसम्म पनि प्रयोगशालाले चुकाइरहेको छ’, उनले भने ।
प्रयोगशालाका अर्का पूर्वप्रमुख ओमप्रकाश यादव भन्छन्, ‘प्रयोगशाला पुरातत्त्व विभागको मेरुदण्ड नै हो । यसलाई बन्द गर्नु ठूलो भुल हुनेछ । बरु कर्मचारीलाई विज्ञानसम्मत उपकरण र तालिम दिएर प्रयोगशालाको गुणात्मक विस्तार गर्नुपर्छ ।’
पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम प्रयोगशालाको महत्त्वलाई लिएर आफूहरू सचेत भएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले बन्द गर्न खोजेका छैनौँ’, गौतम भन्छन्, ‘भएका दक्ष जनशक्ति राखेर प्रयोगशालालाई वैज्ञानिक तरिकाले सम्पन्न बनाउनेबारे सोचिरहेका छौँ । प्रयोगशालालाई उन्नत बनाउन चाँडोभन्दा चाँडो काम गर्नेछौँ ।’
प्रयोगशालामा भएका केही उपकरण जुन हाल अधिकांश चल्दैनन्
प्रयोगशालालाई विज्ञानसम्मत बनाउन आफूहरूले कार्बोन डेटिङ, स्क्यानिङ इलेक्ट्रन माइक्रोस्कोप, एक्स–रे डिफ्याक्टोमिटर, एक्स–रे फ्लोरेसेन्स, एफटीआईआर पोर्टेबल, ग्राउन्ड पेनेट्रेटिङ राडारलगायतका मेसिन खरिदका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा समेत माग राखेको कञ्चन बताउँछन् । तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री योगेश भट्टराईले आफ्नो मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएको समेत उनको दाबी छ । तर, प्रत्येक वर्ष फेरिएका सचिवलाई प्रस्तावना बुझाउँदाबुझाउँदै आफ्नै कार्यकाल सकिन लागेको कञ्चन गुनासो गर्छन् ।
‘एउटा काठ कति वर्ष पुरानो भनेर पत्ता लगाउने कार्बोन डेटिङ मेसिनसमेत हामीसँग छैन । बेलायतको दुहार्म युनिभर्सिटी नै पठाइन्छ । यो लाजमर्दो कुरा हो’, कञ्चन दाबी गर्छन्, ‘उपकरण र तालीम दुवै हुने हो भने हामी प्रयोगशालालाई विज्ञानसम्मत बनाउन सक्छौँ ।’ संरक्षणका काममा लघुताभाषको मनोविज्ञानले नेपाललाई परर्निभर बनाइदिएको उनको बुझाइ छ ।
त्यसो त पुरातत्त्व विभागले सन् २००८ मा नै बेलायतको दुुहार्म युनिभर्सिटीसँग आफ्ना पुरातात्त्विक सम्पदाको निरीक्षण, परीक्षणलगायतका प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौता हालै मात्र सन् २०२४ सम्मलाई नवीकरण भएको गौतम बताउँछन् ।
परेवको गुँड बनेको प्रयोगशाला परिसर
संघीय प्रणालीमा जानुअघि स्वायत्त निकायको रूपमा सञ्चालन भइरहेको प्रयोगशाला संघीयतापछि पुरातत्त्व विभागअन्तर्गत मर्ज भएको हो ।
१० करोड बजेट उपलब्ध भए माग गरिएका उपकरण खरिद गर्न सकिने कञ्चन दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘प्रयोगशाला विकास गर्न राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्दैन । यो वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो ।’
इतिहासविद् महेशराज पन्त भने उपकरण उपलब्ध गराएर पनि चलाउन सक्ने दक्ष जनशक्ति भए/नभएकोमा संशय व्यक्त गर्छन् ।
नेपालको पन्ध्रौँ योजनाअन्तर्गतसमेत प्राचीन सांस्कृतिक एवम् तिनीहरूको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको वैज्ञानिक अभिलेखको अभाव हुनुलाई समस्याको रूपमा सूचीकृत गरिएको थियो । उनी भन्छन्, ‘प्रयोगशालालाई विज्ञानसम्मत बनाउनुको विकल्प छैन ।’
यस कारण सुरु गरिएको थियो प्रयोगशाला : भीमवर सिंह थापा / स्थापनकर्ता
यसरी स्वयम् संरक्षण पर्खिरहेको प्रयोगशाला आखिर के कति कारणले सुरु गर्न आवश्यक ठानिएको थियो त ? प्रयोगशालाका काम सुरुवात गर्दाका अनुभव भीमवर सिंह थापाबाट !
२०२२ सालको कुरा हो । मैले भर्खरै बीएस्सी पास गरेको थिएँ । म र मेरो साथी उपेन्द्र सापकोटा तत्कालीन पब्लिक साइन्स क्याम्पसका (हाल अस्कल) प्रमुख अमृतप्रसाद प्रधानलाई भेट्न गएका थियौँ । हामीलाई देखेर अमृत सरले ‘पुरातत्त्व विभागले दुई जना केमिस्ट मागेको छ, तिमीहरू जाओ’ भन्नुभयो । हामी पुरातत्त्व विभाग गयौँ । पुरातत्त्व विभागका सुरुवातकर्ता रमेशजंग थापा महानिर्देशक थिए ।
भारतको देहरादुन प्रयोगशालाबाट डीपी पुरी नाम गरेका वरिष्ठ केमिस्ट आउँदै हुनुहुन्छ । भारतीय दूतावासले दुई जना केमिस्टलाई तालिम दिने भएको छ । गजेटेड अफिसर सरह छ महिनाको कोर्स पूरा गरेर आउने प्रस्ताव हामीलाई उनले दिए । हामी पनि गयौँ । पुरातात्त्विक सम्पदालाई कसरी रासायनिक विधिबाट संरक्षण गर्ने भनेर हामीलाई सिकाइयो । फर्केर आएर हामीले भक्तपुरको पचपन्न झ्याले दरबारको भित्ते चित्र संरक्षण गर्‍यौँ । त्यति मात्रै होइन, हामीले कुमारीघरको भित्ते चित्रलाई अलग्गै जोगाएर संरक्षण गर्‍यौँ ।
अब हामीसँग तालिम त थियो तर काम गर्नलाई ‘पोस्ट’ थिएन । चिन्ता नगर, म तिमीहरूका लागि पोस्ट भनाइदिन्छु भनेर रमेशजंग सरले हामीलाई आश्वासन दिनुभयो । त्यही क्रममा पुरातत्त्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयका काममा हामी छरियौँ । त्यसै सिलसिलामा हामीलाई ट्रेनिङका लागि पुनः इटाली जाने छात्रवृत्ति पर्‍यो । कन्जर्भेसन अफ कल्चरल प्रोपर्टी विषयमा मैले १ वर्षको डिप्लोमा कोर्स गरेँ । फर्किएर आएर हामीले २०२८ सालमा पहिलोपटक छाउनी संग्रहालयको पछाडि दलानमा एउटा अफिस खडा गर्‍यौँ । अफिसकै रूपमा खडा भए पनि नेपाल सरकारबाट यसलाई सम्बन्धनप्राप्त भने भएको थिएन ।
त्यसपछि हामीले तालिम लिएर बुझेअनुसार नै संरक्षणको काम गर्न थाल्यौँ । पुरातात्त्विक सम्पदालाई वातावरण, हावापानीले चिसो, केमिकल, ओस, ढुसीजस्ता चीजबाट कसरी जोगाउने भनेर रासायनिक विधिबाट काम गर्न थाल्यौँ । अभिलेखालयमा भएका पाण्डुलिपिहरू, किताब, मूर्ति, काठ, हड्डी संरक्षण गर्न थाल्यौँ । काम गर्दै जाने क्रममा हामीलाई संरक्षण गर्नुअघि र पछिको तस्वीर पनि आर्काइभ राख्नुपर्ने भएपछि हामीले फोटोग्राफर माग गर्‍यौँ । पौवालगायतका चित्रहरू जोगाउन कलाकार थप्यौँ । सहयोगी केमिस्टहरू राख्यौँ । हामीले उनीहरूलाई तालिम दिँदै सिकाउँदै काम गर्‍यौँ । हेर्दाहेर्दै काम र कर्मचारी थपिँदै जान लाग्यो । त्यसबेला प्रयोगशालाको नाम रासायनिक संरक्षण प्रयोगशाला राखिएको थियो ।
रासायनिक विधिबाट प्रयोगशालाले गरेको मूर्तिको संरक्षण (पहिले र अहिले)
त्यसबेला संग्रहालयका वस्तु मात्रै होइन, दरबारभित्रका टुँडाल, मूर्तिलाई पनि कसरी जोगाउने, झिँगटीको झार कसरी हटाउने भनेर हामी सल्लाह गरेर काम गर्थ्यौं । यसरी हामी विभिन्न सेक्टरमा छरिएका थियौँ । गर्दै जाने सिक्दै जानेजस्तो भएको थियो ।
२०३० सालतिरको कुरा हो । फ्रान्सबाट एक जना विज्ञ प्रयोगशाला आइपुगे । मानक प्रयोगशाला कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अनुभव साटेर उनले हामीलाई पुरातत्त्वमा ठोस प्रयोगशाला हुनुको महत्त्व बुझाएर गए । त्यसपछि हामीले पनि यसरी कोठामा सीमित भएर हुन्न भनेर प्रयोगशालाको कन्सेप्ट बनायौँ । त्यहीअनुसार पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत नै राखेर वि.सं २०३६ सालमा २४ कोठाको भवनसहितको प्रयोगशालाको अफिस पाटन मंगलबजारमा खडा गर्‍यौँ ।
यसरी छाउनीमा संरक्षण शाखाको रूपमा रहेको रासायनिक प्रयोगशाला पाटनको मंगलबजार सर्‍यो । र, केन्द्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण प्रयोगशालाको रूपमा रहन गयो ।
हामी त काजमा आएका थियौँ । त्यसपछि कर्मचारीको दरबन्दी खोलियो । तर, समस्या कहाँनेर आइदियो भने विविध सेवाबाट आएका कारण मलाई तत्कालीन भक्तपुर संग्रहालयमा प्रमुख बनाएर पठाइयो । सेवा समूहअन्तर्गतका वरिष्ठ केमिस्टलाई प्रयोगशालाको निर्देशक बनाइयो । संरक्षणका विभिन्न काम गरियो तर तालिम लिएर पोख्त भएको जनशक्तिलाई सरुवा गरिदिएर खानी विभागबाट आएका केदारप्रसाद रञ्जितकारलाई प्रमुख बनाइदिएर ममाथि ठूलो अन्याय भयो ।
रासायनिक विधिबाट प्रयोगशालाले गरेको अभिलेखको संरक्षण (पहिले र अहिले)
केमिस्ट्री पढेर मात्रै आउनेले संरक्षणको चेत विकास गर्न जानेनन् । यही सेवामा राखेर तालिम दिएर अन्त सरुवा गर्न नपाइने प्रबन्ध मिलाउन प्रस्ताव पनि राखेको थिएँ तर सरकारी निकायमा कहाँ हुन्थ्यो र ? हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा सरुवा त रोग नै बनेको छ ।
त्यसपछि प्रयोगशाला कर्मचारीका लागि पुल मात्र बन्दै गयो । सरुवा भएर अन्त जाने भएपछि तालिम लिएर कार्यालयलाई उकासौँ भन्ने भावना पनि हुँदैन । पुरातत्त्व विभागमा पनि हाकिम फेरिँदै गए । के प्रयोजनका लागि सुरु भएको थियो भन्ने मर्म सबैले बुझ्न सकेनन् ।
उन्नत उपकरण ल्याएर कर्मचारीहरूलाई त्यहीँ वृत्ति विकासको अवसर दिइनुपर्छ । हाकिमदेखि तलसम्मका स्टाफहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । अनि मात्र प्रयोगशाला फेरि उठ्न सक्छ ।
हरेक कुरा बाहिर पठाएर त कतिञ्जेल होला । एक दिन त नेपाललाई पनि प्रयोगशालाअन्तर्गत विज्ञानसम्मत हुनु त छँदै छ । उत्खनन भएका मुद्रा, काठ, मूर्ति, मेटल कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने सबै कुराको तालिम लिएका थियौँ । तर, अब अहिले उत्खनन कहाँ हुन्छ, के गर्छ, केही अत्तोपत्तो छैन । तालिम दिएर उनीहरूको सरुवा नगरी वृत्ति विकास गरिदिने हो भने प्रयोगशाला जाग्छ । काम यति धेरै छ कि यति असंख्य छ कि बयान गरेर साध्य नै छैन ।
हिजोको दिनमा मायादेवी मन्दिरको पत्रपत्र उप्कियो भनेर संरक्षण गर्न जाने हामी नै थियौँ । उत्खननको इँटामा आएको ढुसी हटाउने पनि हामी नै थियौँ । जहाँ जे पर्छ, प्रयोगशालाले नै गर्ने हो । सबै कुरा किताबमा त लेखिएको छैन । तालिम नै चाहिन्छ ।
हामीले प्रयोगशाला सुरु गर्दाताका दिल्लीका सम्मेलन, श्रीलंकाको सार्क सम्मेलनमा नेपालको कामबारे शानका साथ बोलेर आएका थियौँ तर आज प्रयोगशाला त्यस्तो अवस्थामा देख्दा कस्तो लागेको होला मलाई ? सन् १९९१ मा कोलम्बोमा र १९७६ मा दिल्लीमा भएको थियो कार्यक्रम । अब अहिले त कुनै देशसँग पनि प्रयोगशालाको सम्बन्ध छैन होलाजस्तो लाग्छ ।
रासायनिक विधिबाट प्रयोगशालाले गरेको मुद्राको संरक्षण (पहिले र अहिले)
म इटालीमा छँदाखेरि १००/५० डलर तिरेर युनेस्कोको समेत सदस्यता लिएको थिएँ । थाहा छैन, त्यो सदस्यता पनि प्रयोगशालाले नवीकरण गरेको छ कि छैन ।
रिटायर्ड भएको यतिका वर्षपछि तीन महिनाअघि मात्रै म प्रयोगशाला पुगेँ । आफूले जन्माएको सन्तान आफ्नै हातामा आप्रवासीजस्तो भएर, रोगी भएर बसेको देख्दा नरमाइलो लाग्यो ।
हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको खबर के छ ? नेतृत्व गरेका हाकिमलाई नै पनि यसको महत्त्व थाहा नहुनु दुःखद कुरा हो ।
प्रयोगशालालाई थप प्रयोग नगरियोस् : पूर्वप्रमुखहरूको आह्वान
प्रयोगशालाका पूर्वप्रमुख डा. प्रेमरत्न स्थापित, ओमप्रकाश यादव पनि हाल प्रयोगशाला उपेक्षित भएको देख्दा विस्मृत लागेको बताउँछन् । ३०/३२ जना दरबन्दी रहेको प्रयोगशाला हाल कर्मचारी र कामविहीन भएको देख्दा दुःख लागेको प्रेमको भनाइ छ ।
आफ्नोे पालामा पानी चुहिएर फुसफुस भएको पाटनको कृष्ण मन्दिरसमेत ११ महिनामै जीर्णोद्धार गरेको र अशोक स्तम्भको ढुंगा फुटेर चिरा पर्दा रासायनिक विधिबाट संरक्षण गर्नेलगायतका चुनौतीपूर्ण काम गरेको स्मरण गर्छन् उनी ।
आफ्नो पालामा प्रयोगशालालाई अत्यावश्यक स्पेक्टोमिटर, पीएच मिटर, कन्डक्टिभिटी ब्रिज किनेर भौतिक रूपमा समेत प्रयोगशालालाई सम्पन्न बनाउन मद्दत गरेको प्रेम बताउँछन् ।
त्यस्तै, पूर्वप्रमुख ओमप्रकाश यादव हाल रिटायर्ड भएर पनि अभिलेखालयबाट पाण्डुलिपि अभिलेख संरक्षणमा काम गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘यति धेरै काम हुँदाहुँदै प्रयोगशाला प्रयोगविहीन हुनुको कुनै तुक छैन ।’
पूर्वप्रमुख पद्य वैद्य भने आफ्नो पालादेखि नै पुरातत्त्व विभागले काम र बजेटमा कटौती गरी प्रयोगशालालाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लगाउँछिन् । स्रोत साधनकै सीमितताका कारण आफूले काम गर्न नसकेको पूर्वप्रमुख कमल रेग्मी स्वीकार्छन् ।
स्रोत : केन्द्रिय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण प्रयोगशाला
हटप्लेट, हट इयर ओभन, माइक्रोस्कोप, पीएच मिटर, मोफल फर्नेक, फ्लेस्कोमिटर
माग गरिएका उपकरणहरू
कार्बोन डेटिङ, स्क्यानिङ इलेक्ट्रन माइक्रोस्कोप, एक्स–रे डिफ्याक्टोमिटर, एक्स–रे फ्लोरेसेन्स, एफटीआईआर पोर्टेबल, ग्राउन्ड पेनेट्रेटिङ राडार
तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ/शिलापत्र
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन २१, २०७८, ०६:५०:००